umbuzo CLS DC-10-30F Review
I-2 iminyaka ye-3 imihla edlulileyo - I-2 iminyaka ye-3 imihla edlulileyo #195 by Gh0stRider203
Andiyi kuthetha amanga, ndingumntu fan ye 3 iintaka injini. Bebesoloko. Niya Ayifane saNdibona kuyo nantoni na engaphantsi kwe-injini 2.
Le ntaka lihle. iza a lot of liveries, iinkcukacha ezintle nyhani, ujongana enkulu kodwa kukho isuntswana ingxaki nayo ...
Uyabona, max-uluhlu kule ntaka idweliswe njenge 6,600 mi; Max Fuel lubalwa 36,650 US gal; and max uthabathe-off ubunzima lubalwa 572,000 lbs.
Kodwa, ukuba ukhangela e FSX ... libonisa Max ubunzima epheleleyo njengoko 558,000lbs kunye nepetroli max elivumelekileyo njengoko 32,368 iilitha, umahluko ka 4,282 iilitha.
Kanye ngoku ndiza kwenza NM moya 6305.0, yaye mna phantsi 7% ngasekhohlo. Ndiye ndizame ingami kwi Mach .82 (oko kukuthi isantya cruise eqhelekileyo) ezinyaweni 35,000, wayisusa kunye kwamatanki ngokupheleleyo. Akubuzwa ... I gonna kwenza i 4.5 hrs w / o kokuba ifake ....
Ndiye messaged CLS ukuze ubone ukuba sele ukwazi oku, kwaye kungoku nje belindele ukuva umva.
Abangenzanga indlela ILS kodwa (hayi kusetyenziswa kule yayizihambela lol ukuba um lol ezahlukeneyo), kodwa musa ukulindela ukuba kube nzima kakhulu ukwenza.
Ukuza kuthi ga ngoku ke .... Ndingathanda ukunika le ntaka i uA nice (Yhe watshintsha ingqondo yam lol). Xa I faka omnye ukusuka apha Thomas uRute, ndiya kubeka phezulu ngokutsha kuloo lol elinye Ngaba kuba suku okanye ngeentsukwana nje Asisoloko ngaphantsi kwe-moya max-uluhlu xa kuziwa impahla
Uhlobo lokugqibela: I-2 iminyaka ye-3 imihla edlulileyo Gh0stRider203.
I-2 iminyaka ye-2 imihla edlulileyo #199 by Gh0stRider203
ILS kuthe tye ngokufanelekileyo kule ntaka, ngombulelo. Kuyavunywa I basebenzisa iindlela ezimfutshane zebhodi, kodwa lol Kanti akukho impendulo evela CLS ....
Ixesha ukwenza page: 0.204 imizuzwana